Top 12 Mere Iji mgbọrọgwụ Your akporo ekwentị
ISIOKWU Nkpọrọgwụ Android Devices
Android Nkpọrọgwụ Ngwaọrụ
Flash a ROM ka Android
Ihe mere bụghị ka mgbọrọgwụ Android
Ihe na-eme n'ihu dịrị Android
Ihe mere ka mgbọrọgwụ Your akporo ekwentị
Mgbọrọgwụ Galaxy Tab 2 7.0
Best 8 Android Nkpọrọgwụ Ngwaọrụ Ịlụ Nkpọrọgwụ Access na ma ọ bụ na-enweghị Computer
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy Gio S5660
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy Ace S5830i
Iji mgbọrọgwụ ma ọ bụ na a kwụsịrị? Nke ahụ bụ ajụjụ nke nwere ike mgbaghoju anya ị a otutu. Dịrị gị Android ekwentị na-enye gị ihe ùgwù na-akara nke ọ bụla akụkụ nke gị Android ndụ. Mgbe dịrị, ị nwere ike adị n'elu Android ekwentị, melite ndụ batrị, na-enwe ngwa ọdịnala na-achọ mgbọrọgwụ ohere, na ndị ọzọ. Ebe a, m depụta si n'elu 12 mere mgbọrọgwụ Android ekwentị. Na-agụ ya na mgbe ahụ nghoputa na ihe mere na njedebe nke isiokwu.
Ihe Mere 1. Wepụ Bloatware
Ọ bụla Android ekwentị nwere ọtụtụ enweghị isi preinstalled bloatware. Ndị a bloatware igbapu gị ndụ batrị na n'efu ohere na ebe nchekwa ekwentị. Na-eche annoyed banyere bloatware ma na-achọ iji wepụ ha? N'ụzọ dị mwute, ndị a bloatware bụ irremovable na i nwere ike ime ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị gị Android ekwentị. Ozugbo dịrị, na ị na-enwe ike iji wepụ ha kpam kpam site na gị Android ekwentị.
Ihe Mere 2. Speed ​​Up Your akporo ekwentị ịrụ Faster
I nwere ike ime ọtụtụ ihe mbo mbuli gị Android ekwentị na-enweghị dịrị, dị ka wụnye MobileGo.apk faịlụ ọcha caches na junk faịlụ. Otú ọ dị, mgbe gị na Android ekwentị na-esite, i nwere ike ime ọzọ aka ịrụ ọrụ. Ị nwere ike wepụ na-achọghị bloatware, abanye n'ọnọdụ ezumike ngwa ọdịnala nke na-agba ọsọ na ndabere-akpaghị aka. E wezụga, i nwee Ị kpọghee ekwt ụfọdụ ngwaike nkọwa ka ngwaike ịrụ mma.
Ihe Mere 3. Enwe égwu na-achọ Nkpọrọgwụ Access
E nwere tọn jụụ ngwa ọdịnala na Google Play Store, ma ọ bụghị ha niile bụ ndị maka gị Android ekwentị. Nke ahụ bụ n'ihi na ụfọdụ ngwa ọdịnala na-egbochi site manufactures ma ọ bụ na-ebu. Nanị ụzọ iji ha bụ iji kwụsịrị gị Android ekwentị.
Ihe 4. Mee a Full Ndabere maka Your akporo ekwentị
Ekele Android emeghe ọdịdị, ị nwere mfe ohere ọdịnaya echekwara na SD kaadị. Ọ bụ ya mere ị nwere ike mfe ndabere music, photos, videos, akwụkwọ faịlụ, na ọbụna kọntaktị site na SD kaadị. Otú ọ dị, ọ bụ n'ebe dị anya n'ebe ezu. Mgbe ị na-nweta nkwalite ka a ọhụrụ Android ekwentị ma ọ bụ na-eme ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta, ị ga-chọrọ nkwado ndabere na mpaghara na ngwa na-eji ngwa data maka ọdịnihu na-eji. Ke adianade do, ụfọdụ egwu ndabere ngwa, dị ka Titanium, na-nanị ndị gbanyere mkpọrọgwụ Android igwe.
Ihe 5. Wụnye kacha ọhụrụ Android Version
Oge ọ bụla ọhụrụ version nke Android (dị ka Android 5.0) abịa si, ọ na-ewetara gị ọhụrụ atụmatụ, na mma ọrụ ahụmahụ. Otú ọ dị, ndị ọhụrụ version bụ nanị maka mmachi flagship gam akporo igwe, dị ka Google Nexus Series. Ọtụtụ n'ime nkịtị Android igwe na-dị nnọọ hapụrụ, ma ọ bụrụ na otu ụbọchị emeputa na-eme ka mgbanwe ụfọdụ na-enye gị ike ime ya. Ọ bụ ike na-ekwu mgbe ọ ga-abịa. Ya mere, na-akpa mmadụ iji ọhụrụ Android version na gị nkịtị ekwentị, ị pụrụ ime ihe ọ bụla ma kwụsịrị ya.
Ihe Mere 6. Gbochie mgbasa ozi Play égwu seamlessly
Nri ye mgbasa ozi na-ewere ọnọdụ mgbe niile na ọkacha mmasị gị ngwa, ma na-achọ igbochi ha niile? Ọ gaghị ekwe omume igbochi mgbasa ozi na ngwa ma ọ bụrụ na gị Android ekwentị na-esite. Ozugbo dịrị, ị nwere ike iwunye ụfọdụ tinye-free ngwa, dị ka AdFree, igbochi niile advertisement na-egwu ọkacha mmasị gị ngwa seamlessly.
Ihe Mere 7. Mma ndụ batrị
Dị ka m kwuru n'elu, na-emepụta na-ebu na-etinye ọtụtụ preinstall ma enweghị isi ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị. Ndị a ngwa ọdịnala na-agba ọsọ na ndabere na igbapu batrị. Iji zọpụta ma melite ndụ batrị, na-eji omenala ROM bụ oké nhọrọ. Iji mee ka ya, dịrị Android ekwentị bụ nzọụkwụ mbụ ị ga-ewere.
Ihe Mere 8. Flash a Custom ROM
Ozugbo gị Android ekwentị na-esite, na ị na-enwe ike Ị kpọghee ekwt bootloader Flash a omenala ROM. Na-egbu maramara a omenala ROM na-eweta a otutu uru maka gị. Ọ na-agbanwe ụzọ ị na-eji gị Android ekwentị. Ka ihe atụ, na a omenala ROM, ị nwere ike iwunye ụfọdụ ad-free ngwa ka mma ndụ batrị, nweta nkwalite e mesịrị nsụgharị nke Android gị Android ekwentị nke adịghị ya ma.
Ihe Mere 9. ebuli System
Na gị gbanyere mkpọrọgwụ Android ekwentị, ị pụrụ ime ọtụtụ ihe na-ebuli usoro. Akara ókwú 'nchekwa na emi odude ke / usoro / Akara ókwú. Ozugbo ị ga-esi mgbọrọgwụ ohere, ị nwere ike ibudata ọkacha mmasị gị font si internet na-agbanwe ya ebe a. E wezụga na, na / usoro / kpuchie zọpụta ụfọdụ faịlụ nke ga-agbanwe na-ebuli usoro, dị ka ngosi pasent nke batrị, na-eji uzo ngosi center, na ndị ọzọ.
Ihe Mere 10. Wụnye ngwa ọdịnala na SD Kaadị onwe elu Space
Nọmalị, ngwa ọdịnala na-arụnyere na ebe nchekwa ekwentị gị Android ekwentị. Ohere nke ebe nchekwa ekwentị dị nta. Ọ bụrụ na gị arụnyere ngwa-agba ọsọ nke ebe nchekwa ekwentị gị, ekwentị gị na-aghọ onye na-adịghị. Iji zere ya, dịrị bụ oké ụzọ maka gị. Site dịrị gị Android ekwentị, you'e ike iji wụnye ngwa ọdịnala na SD kaadị onwe elu ebe nchekwa ekwentị ohere.
Ihe Mere 11. Iji Gaming njikwa Play Games na android ekwentị
Bụ omume na-egwu egwuregwu ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị site na iji a Ịgba Cha Cha njikwa? Ee n'ezie. Ị nwere ike mfe jikọọ gị Ịgba Cha Cha njikwa gị gbanyere mkpọrọgwụ Android ekwentị maka Ịgba Cha Cha-akpọ na ikuku Bluetooth. Gụkwuo banyere otú iji mee ya.
Ihe Mere 12. N'ezie na gị onwe gị akporo ekwentị
Ikpeazụ mere ka mgbọrọgwụ Android m chọrọ ikwu bụ na mgbọrọgwụ ohere, na ị na nanị nwe gị Android ekwentị. N'ihi na Carriers na-emepụta mgbe niile ka na-agbalị ịchịkwa gị Android ekwentị site na wụnye preinstalled ngwa. Otú ọ dị, site inweta mgbọrọgwụ ohere, ị nwere ike igbochi pụọ njikọ dị n'etiti gị Android ekwentị na-ebu na-emepụta ihe, na n'ezie nwere gị Android ekwentị.
Na-egosi gị Opinion site polling na Topic N'okpuru ebe
Nzọụkwụ na-nzọụkwụ Guide to Nkpọrọgwụ Nexus 10
A Full Guide maka Olee otú Iji mgbọrọgwụ Nexus 9
2 Mfe Ụzọ Nkpọrọgwụ Nexus 7